Ukushisa okuyisisekelo ngaphambi kwanyangazonke: kufanele kube yini. Ukushisa okuyisisekelo 37 ngaphambi kwenyanga (phezulu)
Ukushisa okuyisisekelo ngaphambi kokuya esikhathini kuyindlela ephumelelayo yokuxilongwa okusebenzayo
Isisekelo se-basal lokushisa indlela yindlela engafani ngqo ye-progesterone kuma-receptors ashisayo e-hypothalamus, okwenza ukwanda kokushisa okuyisisekelo esigabeni sesibili sokujikeleza kokuya esikhathini. Ngokwesayensi kutholakale ukuthi ngaphansi kwethonya le-progesterone ukushisa kwama-rectal kuphakama, ngaphansi kwethonya lama-estrogens - kunciphisa. Uma sikhuluma ngokuchazwa kwale datha ngokubeka usuku lokuvuthwa kwegazi, odokotela bayaqaphela ukuthi usuku lokuvuthwa yilolu suku "ngaphambi kokuqala kokukhula kwezinkomba zokushisa." Ukushisa okuyisisekelo ngaphambi kokuya esikhathini akukwazi ukuthathwa njengendlela enokwethenjelwa yokunquma isikhathi sokuvuthwa (ukuhlanganiswa phakathi kwezinguquko kuma-ovari kanye nezinguquko zokushisa okuyisisekelo kuphela 40%). Le nqubo isebenza kahle ngokuhlola "ekhaya": kuyasiza ekuhleleni ukukhulelwa nokungabikho okuqinisekisiwe kokuya esikhathini sokuya esikhathini.
Ukuvuthwa yisiteji sokujikeleza kokuya esikhathini, ukuphuma kweqanda elivuthiwe emgodini wesisu. Kwabesifazane abakwazi ukukhulelwa, ukuvota kubonakala njalo ezinsukwini ezingu-21-35. I-periodicity iqondiswa ihomoni ye-follicular ye-ovary ne-gonadotropic ama-hormone we-pituitary gland. Ukuvuthwa kunomthelela ekunciphiseni izicubu ze-ovarian kanye nokuqoqwa kwamanzi kagesi. Ohlala njalo owesifazane ngamunye ishyindo sokuguquka kwesibindi ngemuva kweminyaka engu-40, emva kokukhipha isisu nokubeletha. Esikhathini esiphezulu futhi lapho kuqala ukukhulelwa, ukuvota kuphelile. Izimpawu ezisemqoka / ezihloswe zokuvuthwa kwegazi: ukudonsa ubuhlungu emathunjini aphansi, ukwehlisa i-BT ngosuku lokuvuvukala nokukhuphukela kokulandelayo, ukwandisa ukwanda kwamanqamu wesisu, okwandisa izinga le-progesterone egazini. Ukwehluleka kwe-ovulation kungabangela ukuvuvukala kwezifo zobulili, ukucindezeleka, izifo zesimiso, ukungasebenzi komzimba we-thyroid / cortex. Ukuvuthwa kwegazi kubonakala ngokuphuma kwegazi, ukuhamba esikhathini esibi, ukuhamba kwemithi.
Izimpawu zokuzala (ikhono lokukhulelwa)
Ekuqaleni komjikelezo, ukuvulwa komlomo wesibeletho kuvaliwe ipulaki, ehlanganisa i-mucus enamandla. Ukuvuthwa kweqanda kubangela ukwanda okukhulu ekuhlosweni kwama-estrogen, ngaphansi kwethonya lazo izigulane zomlomo wesibeletho eziqala ukukhiqiza i-mucus. Esigabeni sokuqala, umcucu we-buccal uhambela kahle, okwesibini ulula futhi ubala - lokhu kubonakaliswa ukuzwa komswakama emngceleni wesifazane. I-fetus mucus ibonakala njengeqanda elimhlophe elimhlophe, licebile ezakhiweni ezidingekayo ukuze isidoda singene esibelethweni. Ukucubungula kungenzeka, uma kune-slime. Akunakwenzeka uma kungenjalo. Esinye isibonakaliso esibalulekile sokuzala kuyashintsha esimweni nasekuhambeni komlomo wesibeletho. Ngaphambi kokuvuthwa, kuqinile, kuyomile, kunciphise phansi isisu. Esikhathini se-ovulatory, umlomo wesibeletho uba mnandi, ulula, uphakanyiswe phezulu.
Yini esiza ukunquma ukushisa okuyisisekelo:
ukutholakala kwezifo zesistimu yokuzala abesifazane;
kungakhathaliseki ukuthi i-ovulation ifikile;
"Eyingozi" (amathuba okukhulelwa) futhi "ephephile" (ukukhulelwa akunakwenzeka) izinsuku;
Ukuthola ukuthi ngabe ukukhulelwa kwenzeka uma kwenzeka esikhathini sokungajwayelekile noma ukulibala kwakhe;
isikhathi sokuqala kokuya esikhathini;
ukutholakala kwanoma yikuphi ukwehluka okungavamile emjikelezweni.
Ukushisa okuyisisekelo kungukushisa kwegazi lomzimba ongasebenzi. Kumele kulinganiswe ku-rectum, ngoba lapho ihlukahluka kumjikelezo ngenxa yomsebenzi wama-ovari. Ngenxa yobuningi bokunikezwa kwegazi, ukushintsha kwezinto eziguquguqukayo kuqiniswa kuphela ngokuqondile. Incazelo ye-ovulation isekelwe ekulinganiseni kwezinga lokushisa kwegazi emgodini we-testicle, ngakho awukwazi ukurekhoda izinga lokushisa emgodini noma emlonyeni womlomo - lokhu kuyinto engelusizo.
Ukushisa okuvamile okuyisisekelo ngaphambi kwenyanga: ishadi
Ngokujwayelekile, uhlelo lwe-BT lubukeka lufana "ne-seagull ehamba ngezinyawo": engxenyeni yokuqala izinga lokushisa lingaphansi kwama-37.0 degrees, okwesibili - ngaphezu kwama-37.0 degrees. Ukuya esikhathini kuya kwezinsuku ezingu-5, ukwehla kweBT ngaphambi kokuthatha inyanga zonke izinyanga ezingu-4, ukuphakama phakathi komjikelezo izinsuku ezingu-3, ​​ukuvuthwa kweqanda ngosuku lwe-15, "izinsuku eziyingozi" zokukhulelwa zingama-9-21, umehluko phakathi kwezinombolo zesigaba sesibili nesigaba sokuqala singaphezu kuka-0.4 degrees .
Isikhathi esihle somjikelezo wesifazane okwazi ukukhulelwa:
kusukela ngosuku lokuqala lokujikeleza kokuya esikhathini kuze kube sekupheleni kokushisa kwe-basal yanyangazonke kwehla kusuka ku-37.0 degrees kuya ku-36.2-36.6 degrees;
kuze kube semkhatsini womjikelezo, i-BT isebangeni elingama-degrees 36.2-36.6;
kwezinye izimo, ngaphambi kokuvuthwa kwegazi, ngenxa yokuqala kwe-hormone ye-luteinizing, i-BT yehla ngo-0.1 degree;
isigaba sesibili somjikelezo sibonakala ngamazinga okushisa ama-37.0-37.4 degrees (ukuguquguquka okungadingekile kuvunyelwe);
Izinsuku ezingu-14 ngaphambi kwenyanga ezayo, ukuvuthwa kwenzeka futhi i-BT ikhuphukela kuma-degrees angu-37.3;
Izinsuku ezimbili ngaphambi kokushisa kwe-basal nyangazonke kancane kancane futhi ekuqaleni kokuya esikhathini kufinyelela kuma-36.7-36.8 degrees;
ukungafani phakathi kwesilinganiso se-BT yesigaba sokuqala nesesibili kufanele sibe yizi-0.4-0.5 degrees.
Imithetho eyisisekelo yokulinganisa ukushisa okuyisisekelo:
Kuyinto efiselekayo ukukala i-BT ngo-6-7 ekuseni, ngesikhathi esisodwa (kanye / nciphisa ihora);
sebenzisa i-mercury thermometer, i-thermometer ye-elekthronikhi iyaphazamisa ukufundwa;
ukuvuka, ngaphandle kokuhlala phansi, ngaphandle kokuphuma embhedeni, kufanele ufake i-thermometer ngaphakathi kwe-anus ngokujula kwama-4-4.5 amasentimitha;
lapho uhlela isimiso, kunconywa ukuba ulungise ngokucophelela izici ezingathinta ukushisa okuyisisekelo: isifo sokushintsha kwezinga lokushisa, ukusetshenziswa kweziphuzo ezidakayo, ukusetshenziswa kwamaphilisi okulala, nokulala ngokwanele. Kubaluleke kakhulu ukugcina izinguquko emgqonyeni wesibeletho nokuphuma esikhathini.
Uma ukushisa okuyisisekelo ngaphambi kokunyuka kwenyanga - izimbangela:
36.9 esigabeni sokuqala somjikelezo. Isizathu sise okuqukethwe okuphansi kwe-estrogen, ukusebenza okungalungile kwama-ovari. Ukungabi namabhomu ama-sex hormone - iqanda alivuthanga - lona wesifazane akayinyumba kulo mjikelezo;
37,1 / 37,2 ngokulandelana kokubambezeleka kokuya esikhathini. Uphawu olubonakalayo lokukhulelwa;
37.3 ngaphambi kwenyanga. Kubonisa isifo esithathelwanayo esithathelwanayo noma ukugxila kokuvuvukala;
I-BT inenkani ngenkani ezingeni lika 37.1-37.5. Uphawu olusola - kukhona amathuba aphezulu okukhulelwa kwe-ectopic.
Uma ukushisa okuyisisekelo ngaphambi kokuncipha kwenyanga njalo - izimbangela:
esigabeni sesibili, ukushisa kwe-basal kwehla (kwehla ngaphansi kwama-37.0 degrees) izikhathi ezingu-1-2. Lokhu kuyisibonakaliso esicacile sokufa kweqanda;
ukwehla ku-BT ngaphambi kokuya esikhathini kudla izinsuku ezintathu noma ngaphezulu. Isimo sibonisa iqanda "elibuthakathaka", elingasisebenzisi ukungena emthethweni;
ngokumelene nesizinda sokubambezeleka kokuya esikhathini, ukushisa okuyisisekelo kuhla ngaphansi kwama-37.0 degrees. Lokhu kusikisela ukungasebenzi kwamathambo ama-ovari.
Izigaba zezinyanga zokuhamba esikhathini ngesisekelo sezinhlelo ze-BT
Amazinga okushisa aphezulu (36.9 no-37.5) kuzo zombili izigaba nge umehluko wezingu-0.4 degrees yi-state hyperthermal, eyisici ngasinye.
Ukushisa okuphansi okuphansi (36.1 no 36.5) kuzo zombili izigaba, kuyilapho kugcinwa ukuhluka kwezingu-0.4 degrees, kuvamile.
Ukushisa okuvamile esigabeni sesibili (37.1-37.4), high (36.8) - kokuqala. Ubufakazi bokuntuleka kwe-estrogen, okumelwe kuthathwe uma ukukhulelwa kuhlelwe esikhathini esizayo esiseduze.
Ukushisa okuyisisekelo kwesigaba sokuqala ngaphakathi kwesijwayelekile (36,4-36,5), okwesibili - ngaphansi kwesimiso (36,8-36,9). Isibonakaliso sokuntuleka komzimba ophuzi, ogcwele i-progesterone.
Uma udinga ukuvakashela kumgogeni wezinzwa ngemuva kokulinganisa lokushisa okuyisisekelo:
Amashadi okushisa asezingeni eliphansi elivuthayo alikho ngesikhathi semijikelezo yezinsuku 3-4;
ngokumelene nesizinda semijikelezo eminingana nge-ovulation ecacile nokuphila ngokocansi okuvamile, ukukhulelwa akukwenzeka;
ukuba khona kwemijikelezo isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezingama-35, esifushane kunezinsuku ezingu-21;
i-BT ephakeme ngaphezu kwezinsuku ezingu-18 esigabeni sesibili ngokungabikho kokukhulelwa;
ukushisa okuphakeme / okuphansi okuyisisekelo esiphakathi komjikelezo wesimiso.
Ukushisa okuyisisekelo ngaphambi kokuya esikhathini kusiza odokotela ukuba babone izinkinga zemvelo, babeke ukuhlonza kahle, banikeze ukwelashwa okufanele. Kuze kube manje, indlela ye-BT iyona engabizi kakhulu futhi ishibhile, kodwa futhi ingathembekile kakhulu. Ungakhathazeki ngenxa yezinga elilahlekile noma elingeziwe kwigrafu yokushisa okuyisisekelo, angeke isetshenziselwe ukuxilongwa kanye nokwelapha. Kunoma yikuphi ukungabaza okudingekayo ukubhekana nodokotela wezifo zomzimba, esikhundleni sokuthi uthathe isenzo se-selftreatment.
Izinzuzo kanye nokulimala itiye nekhofi
Izakhiwo ze-cypress amafutha abalulekile
Ukubala izikweletu: TOP-3 amacala okudingeka ubambe kuze kuNyaka Omusha
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo zesafire
Yehlisa isandulela-ngculazi somuntu
Izinti ezinkomishi ezine-ayisikhilimu
Ukuziphatha komuntu ofuna ubulili kuphela
Indlela yokugcoba ama jeans ngokulondoloza umkhonyovu wefektri
Izifo nezinye izifo zomuntu
UMaxim Galkin uvele esiteji esithombeni sika-Alla Pugacheva
Amaski esandla esiphuthumayo sokusebenzisa ekhaya
Ukuphila okunempilo komfazi
Amabhabhinethi angamafashini, i-Autumn-Winter 2015-2016 (isithombe): onobuhle kakhulu bezimoto zamabhantshi
Ukubaluleka kokuqeqeshwa kwe-autogenic kokusebenza komzimba okujwayelekile
I-Steak yahlanza i-anyanisi ijusi
Amavesi emvula ngoMashi 8 ngamantombazane, amantombazane nabesifazane
Indlela yokuhlanza isikhwama sesikhumba?
Indlela yokuzothula indoda yakho ethandekayo lapho egula